• ဖြစ်တဲ့သူရဲ့ အသက်၊ ကျား-မ ပြောပါ။ ရောဂါလက္ခဏာ ၁-၂-၃။ တခုတိုင်းက ဘယ်လောက် ကြာပြီ။ • လိုအပ်ရင် ကျန်းမာရေးရာဇဝင်၊ ဓါတ်မှန်၊ (အာလ်ထွာဆောင်း)၊ ဆေးစစ်ချက်၊ လိုအပ်ရင် အိမ်ထောင်၊ ကလေး၊ ရှိ-မရှိ။ နေတဲ့တိုင်းပြည်၊ မြို့ထည့်ရေးပါ။ လူနာမည်၊ နေရပ်လိပ်စာအတိအကျ ကိစ္စမရှိပါ။
• Facebook Comment ကနေမေးတာ-ဖြေတာ အဆင်မပြေပါ။ စာရှည်ရေးမရပါ။ သူများတွေကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
• ဖုန်းဆက်ပြီးမေးရင် Time zone မတူတာရော၊ အသံထွက် လွဲနိုင်တာရောကြောင့် အဆင်မပြေပါ။ ကျွန်တော့်မှာ Viber မရှိပါ။ ဖေ့စ်ဘွတ် ဖုန်း-ဗီဒီယို အဆင်မပြေပါ။ Skype ကိုတော့ နိုင်ငံရေးနဲ့ မိသားစုအတွက်သာသုံးပါတယ်။ drswe01@gmail.com ကို (အီးမေးလ်) ပို့ပါ။
Medical Writings ကျန်းမာရေးနှင့်ဆေးပညာစာတွေကို ဒီ 'ဝဘ်ဆိုက်' ထဲမှာဖတ်နိုင်ပါပြီ။
ဖတ်လိုတာကို ရှာဖွေအင်ဂျင်မှာ ရှာနိုင်ပါတယ်။
ဖြည့်စရာတွေကို အချိန်ရသမျှဖြည့်နေသေးလို့ မစုံသေးပါ။ စာပုဒ်ရေထောင်ကျော်ပါမယ်။
Royal physicians မတူကြသောဆရာဝန်များ
• ဗြိတိန်မှာရှိတဲ့ Royal College of Physicians က နာမည်ကြီးတယ်။ အဲဒီကဘွဲ့ရ ဆရာဝန်တွေကို ‘တော်ဝင်သမားတော်’ လို့ ခေါ်တယ်။ • မြန်မာပြည်မှာ ဒုသမ္မ္မတတဦးက ဆရာဝန်။ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဒေါ်စုကိုယှဉ်အရွေးခံခဲ့သူကလဲ ဆရာဝန်။ • စောစောကဘဲ ပြည်ခိုင်ဖြိုးမှာအလုပ်ရနေတဲ့ ဆရာဝန်(မ) တဦးက ရေမသန့်ရှင်းတဲ့ပြဿနာနဲ့ အဲဒီနယ်က အရွေးခံရတဲ့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးမဟုတ်တဲ့ အမတ်ဆရာဝန်(မ) တဦးကို ဆက်စပ်ရေးထားတာကို ဖတ်လိုက်ရတယ်။ • ၁၉၉ဝ နဲ့ ၂ဝ၁၂ ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ NLD ကနေနိုင်ခဲ့တဲ့ ဆရာဝန်အရေအတွက် မနည်းပါ။
• ဒီလို ကောက်ချက်ချရမလား မသိပါ။ မြန်မာပြည်က ဆရာဝန်တွေဟာ ရောဂါကိုကုတာတော့ တူချင်တူကြမယ်၊ နိုင်ငံရေးမှာတော့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးကဖြစ်မှသာ ‘တော်ဝင်ဘွဲ့’ ရကြတယ်။
Top 10 Medical Expenses ဆေးကုသစရိတ် အကြီးဆုံး (၁ဝ) ခု
အမေရိကမှာ ၁။ Heart Conditions နှလုံးရောဂါများ = ၁ဝ၇့၂ ဘီလီယန်
နှလုံးရောဂါ ၃ ယောက်မယ် ၁ ယောက်လောက် ရှိတယ်။ ဆေးကုသမှုမှာလဲ ဈေးအကြီးဆုံးဖြစ်တယ်။ ကိုယ်အလေးချိန် ထိန်းပါ။ အသီးတွေနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ များများစားပါ။ မကောင်းတဲ့ ကိုလက်စထော (အဆီ) များတဲ့အစာ ရှောင်ပါ။ ဆေးလိပ်မသောက်ပါနဲ့။ ၂။ Injuries ထိခိုက်ဒဏ်ရာ = ၈၂့၃ ဘီလီယန်
တနှစ်ကို လူပေါင်း ၄၅ သန်းထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေရနေကြတယ်။ ယာဉ်ထိခိုက်မှုက အများဆုံးဖြစ်တယ်။ မူးရင် ကားမမောင်းနဲ့။ ထိုင်ခုံခါးပတ်သုံးပါ။ ဟဲလ်မက်ဆောင်းပါ။ လမ်းတွေကောင်းပါစေ။ မလိုအပ်ဘဲလမ်း-ခရီးမသွားပါနဲ့။ ၃။ Cancer ကင်ဆာ = ၈၁့၇ ဘီလီယန်
လူပေါင်း ၁၃့၆ သန်း ကင်ဆာရောဂါရှိနေကြတယ်။ သေနှုန်းတော့ကျလာပါတယ်။ ဆေးလိပ်မသောက်ပါနဲ့။ အရက် လျှော့သောက်ပါ။ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ အစားအသောက် ရွေးစားပါ။ ဆေးစစ်တာ စနစ်တကျလုပ်နေပါ။ ၄။ Mental Disorders စိတ်ရောဂါများ = ၇၃ ဘီလီယန်
လူ ၄ ယောက်မှာ ၁ ယောက် စိတ်ဝေဒနာ တမျိုးမျိုးရှိနေကြတယ်။ ဥပမာ စိတ်ဓါတ်ကျတာ။
၄။ COPD and Asthma နာတာရှည်အသက်ရှူလမ်းရောဂါနဲ့ ပန်းနာ = ၆၃့၈ ဘီလီယန်
လေထုသန့်ရှင်းအောင်ကြိုးစားပါ။ လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေးသတိပြုပါ။ ဆေးလိပ်မသောက်ပါနဲ့။ ၆။ Joint Disorders အဆစ်တာရောဂါများ = ၆၂့၎ ဘီလီယန်
အသက်ရလာလေအဖြစ်များလေ။ ဥပမာ Osteoarthritis အဆစ်နာရောဂါ။ ကိုယ်အလေးချိန် မများစေပါနဲ့။ ကယ်လ်စီယမ် သောက်ပါ။
၇။ Diabetes ဆီးချု = ၅၁့၃ ဘီလီယန်
လူ ၄ ယောက်မှာ ၁ ယောက်နီးပါးရှိတယ်။ နှလုံးနဲ့ ကျောက်ကပ်ကိုဆက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ မျက်စိနဲ့ အာရုံကြောတွေ ထိခိုက်လာနိုင်တယ်။ ဆီးချုရောဂါသည်တွေ စားရမဲ့ အစားအသောက်ကိုသာ တသက်လုံးစားသုံးပါ။ ဆီးချိုစစ်ပါ။ ဆေးကုသမှု စနစ်တကျ ခံယူနေပါ။ ပျောက်တယ်ဆိုတိုင်း မယုံပါနဲ့။
၈။ High Blood Pressure သွေးတိုး = ၄၂့၉ ဘီလီယန်
နှလုံးရောဂါနဲ့ လေဖြတ်တာဆက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ဆားလျှော့စားပါ။ ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။ ဆေးလိပ် မသောက်ပါနဲ့။ အရက်လျှော့သောက်ပါ။ အသီးတွေနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေစားပါ။ ဆေးကုသမှု နေ့တိုင်းလုပ်ပါ။ ၉။ Back Problems ခါးရောဂါ = ၃၉့၃ ဘီလီယန်
ခါးကိုစနစ်ကျေသုံးတတ်ပါစေ။ ကျန်းမာရေးပညာပေးကို အလေးအနက်ထားပါ။ အိပ်-ထိုင်-ရပ်-သွား ဘယ်လို လုပ်ရမယ်ဆိုတာ လိုက်နာပါ။ ၁ဝ။ High Cholesterol ကိုလက်စထောများခြင်း = ၃၇့၂ ဘီလီယန်
ဆီ၊ အဆီ သတိထားသုံးပါ။ ဆေး (သွေး) စစ်ပါ။ ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းပါ။ ဆိုင်စာတွေရှောင်နိုင်သမျှရှောင်ပါ။ အလွယ်ဝယ်စားရတာတွေက မသင့်တာများတယ်။ (၁ဝ) မျိုးရဲ့နောက်မှာကပ်လိုက်လာတာက ၁၁ = ကလေးမီးဖွးခြင်းဖြစ်တယ်။ ၃၄့၉ ဘီလီယန် အမေရိကမှာ တနှစ်ကို ကလေးပေါင်း ၄့၂ သန်းမွေးနေတယ်။ ခွဲမွေးရင် ပိုက်ဆံပိုကုန်တယ်။ လူပျိုကြီး-အပျိုကြီး လုပ်ဘို့တော့ မတိုက်တွန်းပါ။ ကျန်းမာတဲ့ကိုယ်ဝန်ဖြစ်အောင် ဂရုပြုပါ။ မလိုအပ်ဘဲခွဲမမွေးပါနဲ့။
Gilead offers new hepatitis C drug at 99 percent discount
• အသည်းရောင် (စီ) ပိုးကိုကုသပေးနေတဲ့ဆေးကို ဆေးဝါးထုတ်လုပ်တဲ့ အမေရိကန် Gilead Sciences ကုပ္မဏီကနေ အမေရိကမှာရောင်းနေတဲ့ဈေးနှုန်ထက် ၉၉% နည်းတဲ့တန်ဘိုးနဲ့ရောင်းဘို့ အီဂျစ်နဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကို ကမ်းလှမ်းလိုက်ပါတယ်။
• ဆေးနာမည်ကို Sovaldi ဆိုဗယ်လ်ဒီ လို့ခေါ်ပါတယ်။ မူရင်းဈေးနှုန်းက ၁၂ ပါတ်စာအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၈၄ဝဝဝ ဖြစ်ပါတယ်။
• အီဂျစ်မှာ အသည်းရောင် (စီ) ဖြစ်နေတာ အများဆုံးဖြစ်တယ်။ အီဂျစ်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးက ဆေးတလစာ အတွက် ဒေါ်လာ ၃ဝဝ နဲ့ဆေးဆစ်ပါတယ်။ ဆေးကို ၁၂ ပါတ်ပေးရတာဖြစ်လို့ လူနာတယောက်က ဒေါ်လာ ၉ဝဝ ကုန်ပါမယ်။ • Hepatitis C (HCV) (စီ) ပိုးဟာ HIV လိုဘဲ သွေးနဲ့ ဆေးထိုးအပ်ကနေကူးစက်တာများပါတယ်။ • WHO ခန့်မှန်းချက်အရ ကမ္ဘာမှာ (စီ) ပိုးကူးစက်ခံထားရသူပေါင်း သန်း ၁၅ဝ ကျော်ရှိပါတယ်။ နာတာရှည်ကနေ အသည်းခြောက်တာနဲ့ အသည်းကင်ဆာဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ • တခြား ဆေးကုပ္မဏီတွေဖြစ်ကြတဲ့ Johnson & Johnson, AbbVie, Bristol-Myers Squibb and Merck & Co တို့ကလဲဆေးထုတ်လုပ်နေတာ အောင်မြင်မှုတွေရနေကြပါတယ်။ • Sovaldi ဆေးကို ၂ဝဝ၇ မှာ ဒေါ်လာ ၉့၁ ဘီလီယန်ဘိုးရောင်းချခဲ့ရပါတယ်။
Secret serum working on Ebola-infected Americans • ‘အီဗိုလာ ဗိုင်းရပ်စ်’ ကူးစက်ခံထားရတဲ့အမေရိကန်ဆရာဝန်ကို လှို့ဝှက် ‘စီရမ်’ နဲ့ကုသပေး
• အများအာဖြင့် အမေရိကန်ဆေးကုပ္မဏီကြီးတွေကနေ ဆင်းရဲတဲ့တိုင်းပြည်က ရောဂါတွေကို ကုသနိုင်တဲ့ ဆေးဝါးမျိုးတွေကို မထုတ်လုပ်ကြလို့ ဝေဖန်ခံရပါတယ်။ • ဒါပေမဲ့ လူသိမများလှတဲ့ အမေရိကန်ဆေးကုပ္မဏီတခုကနေ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ဆေးနဲ့ ‘လိုက်ဘေးရီးယား’ မှာ ‘ဆမာရီတန် ပါ့စ်’ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ကျန်းမာရေးအဖွဲ့နဲ့အတူလုပ်ပေးနေကြရင်း ‘အီဗိုလာဗိုင်းရပ်စ်’ ပိုးကူးစက်လို့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ‘အတ်တလန်တာ’ မြို့ကို ပြန်ခေါ်လာရတဲ့ဆရာဝန်တွေကို ကုသပေးနေတာ ထိရောက်မှုတွေ တွေ့နေရပါပြီ။
• ဒေါက်တာ ‘ကင့် ဘရန်တလေ’ နဲ့ ‘နန်စီ ရိုက်ဘောလ်’ တို့ကိုထိုးပေးတဲ့ အဲဒီဆေးက ထိပ်တန်းလှို့ဝှက်အဆင့် မှာသာ ရှိသေးတာပါ။ • ဆေးနာမည်က ZMapp ဖြစ်ပါတယ်။ ‘စန်ဒီယာဂို’ မှာရှိတဲ့ ‘မက်ပ် ဘိုင်အိုဖါမာစူတီကယ် အိုင်အင်စီ’ ကနေ ထုတ်လုပ်ထားထားတာဖြစ်ပြီး၊ အရင်က လူတွေမစမ်းရသေးတဲ့ဘဲ မျောက် ၄ ကောင်ကိုသာ စမ်းရပါသေးတယ်။ • အမေရိကန် FDA ကအသိအမှတ်မပြုရသေးပါ။ အဲလိုအတန်းအစားဆေးကို Compassionate use regulation စေတနာသုံးလို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
Aspirin significantly cuts cancer rates ‘အက်စ်ပရင်’ ဆေးကနေ ကင်ဆာသေနှုန်းနည်းစေတယ်
• အကိုက်အခဲ-ပျောက်ဆေး၊ အဖျားကျဆေး၊ သွေးကျဲဆေးအနေနဲ့သုံးနေတဲ့ ‘အက်စပရင်’ ကို နေ့စဉ်သောက်ရင် အစာအိမ်ကင်ဆာ၊ အူမကြီးကင်ဆာ၊ အစာမြိုပြွန်ကင်ဆာကြောင့် သေဆုံးရတာကိုနည်းစေတယ်လို့ သိလာရတယ်။ • ဒီလိုအဖြေထွက်အောင် Queen Mary University of London ကွင်း မေရီ လန်ဒန်တက္က္ကသိုလ်မှာ သုတေသန လုပ်ခဲ့တာပါ။ ၁ဝ နှစ်ကြာလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ အူမကြီးကင်ဆာသေနှုန်း ၄ဝ% ကနေ ၃၅% အထိ ကျဆင်းတယ်။ အစာအိမ်ကင်ဆာ၊ အူမကြီးကင်ဆာ၊ အစာမြိုပြွန်ကင်ဆာကြောင့် ဖြစ်နှုန်း ၃ဝ% နဲ့၊ သေနှုန်း ၅ဝ% ကနေ ၃၅% နည်းစေတယ်။ • ပါမောက္ခ ‘ဂျက် ကူဇစ်’ ပြောတာက တနေ့မှာ ‘အက်စပရင်’ ဆေးပြား 75 ကနေ 100 milligrams ကို ၅-၁ဝ နှစ် သောက်ရမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ လူနာတွေရဲ့ အသက်က ၅ဝ ကနေ ၆၅ နှစ်ရှိသူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ ဆေးသောက်ကာစ ၃ နှစ်အထိတော့ ထူးခြားတာမတွေ့ရပါ။ • သတိထားရမှာက ‘အက်စပရင်’ ကိုရေရှည်ပေးသူတွေမှာ အစာအိမ်သွေးယိုတာဖြစ်လာနိုင်တယ်။ အသက် ၆ဝ အရွယ်တွေမှာ အဲလိုဖြစ်တာ ၂့၂ ကနေ ၃% ပိုတာတွေ့ရတယ်။ • ကင်ဆာသာမကာ ‘ဆထုခ်’ ခေါ်တဲ့ ဦးနှောက်သွေးကြောရောဂါနဲ့ နှလုံးရောဂါတွေကိုလဲ ၁ဝ နှစ်သောက်နေရင် ယောက်ျားတွေမှာ ၉% နဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ ၇% သေနှုန်းနည်းစေတာလဲ တွေ့သိလာရပါတယ်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
DNA test for HIV infection
• စမ်းသပ်နေကြနည်းထက် စောပြီး သိမယ်။
• ပိုးကသွေးထဲဝင်လာတာနဲ့ ‘အင်တီဘော်ဒီ’ တွေ စထုတ်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီ ‘အင်တီဘော်ဒီ’ တွေက ပိုးကိုခံမချနိုင်ဘူး။ ရောဂါရှာဖွေရေးအတွက်သာ အသုံးဝင်သလိုဖြစ်နေတယ်။
• HIV antibody test ‘အင်တီဘော်ဒီ’ စမ်းနည်းကို ELISA or EIA နည်းလို့ခေါ်တယ်။ စံချိန်ကိုက်စမ်းနည်း ဖြစ်တယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကို လိုက်ရှာတာ မဟုတ်ပါ။
• DNA test နည်းကို NAAT = Nucleic acid amplification testing လို့ခေါ်တယ်။ ပိုးကိုလိုက်စမ်းတဲ့နည်း ဖြစ်တယ်။ အင်တီဘော်ဒီနည်းထက် စောသိမယ်။ ART ဆေးပေးနေသူတွေကို စောင်ကြည့်ရာမှလုပ်ရတဲ့ Viral load test နည်းနဲ့ ဆင်တယ်။
• အားနည်းချက်တွေရှိတယ်။ သိပ်အထိမခံသလိုဖြစ်လို့ မှားပြီးအပေါင်းပြတတ်တယ်။ ဒါကြောင့် ဒီနည်းမှာ အပေါင်းပြသူတိုင်းကို စံချိန်ကိုက်စမ်းနည်းဆက်လုပ်ရမယ်။ နေရာတိုင်းမှာ DNA test စမ်းနည်းမလုပ်ပါ။
• ပိုးဝင်ပြီး ၆ ရက် ကနေစပြီး စမ်းနိုင်ပြီ။ ၂၁ ရက်မှာစမ်းတာ ပိုသင့်တယ်လို့ ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ထားတယ်။
• ၁ဝဝ% တိကျတယ်လို့တော့ ပြောမရပါ။
Leprosy Prevention အနာကြီးရောဂါကာကွယ်ရေး
Facebook 25-5-20146hours ago:
ဆရာ အနာကြီးရောဂါဝေသနာခံစားနေရတဲ့သူနဲ့ အတူတူနေ နေရပါတယ်။ မကူးစက်အောင် ဘယ်လိုကာကွယ် ရမလဲဗျ။ ဘယ်လိုဂရုစိုက်သင့်လဲဗျ။ ပြန်ဖြေကြားစေလိုပါသည်။
• ရောဂါရှိနေမှန် စောစောသိပြီး ဆေးကုသမှု စနစ်တကျခံယူရမယ်။ တချိန်တည်းမှာ သူများကို မကူးစက်အောင်ဆင်ခြင်နေရမယ်။
• လူအများကို ရောဂါအကြောင်း၊ ကူးစက်နည်းတွေကို သိစေအောင် ပညာပေးရမယ်။
• တအိမ်တဲအတူနေရသူတွေကို စောင့်ကြည့်နေရမယ်။ ရောဂါလက္ခဏာတွေကို ကြည့်နေရမယ်။
• Rifampicin ဆေးတမျိုးထဲကို ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ ပေးရင် ပဌမ ၂ နှစ်အတွင်းမှာ ၅၇% ကူးစက်မှုသက်သာတာ တွေ့ရတယ်။ ဒီနည်းကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် မသုံးသေးပါ။ ကာကွယ်ဆေးလဲ အများသုံးမပေါ်သေးပါ။
• တီဘီကာကွယ်ဆေးဖြစ်တဲ့ BCG vaccine ကိုသုံးတာ လေ့လာမှုတွေမှာ ၂၆-၄၁% ကောင်းတာတွေ့ရတယ်။
Thrush (Oral candidiasis) မှက္ခရုနာ နို့တိုက်အရွယ် ကလေးငယ်တွေမှာ လျှာ၊ အာခေါင်၊ ပါးစောင်တွေမယ် အဖြူဖတ်တွေ ဖြစ်ပြီး၊ ဘေးက နီနေတယ်။ နာတယ်၊ နို့စို့ရ၊ အစာစားရ ခက်တယ်။ Moniliasis လို့လဲ ခေါ်တယ်။ ကလေးရဲ့ လျှာကို အဝတ်သန့်သန့်လေးကို လက်ညှိုးမှာပါတ်ပြီး အဖြူဖတ်တွေ ရှင်းပေးပါ။ Gentian Violet ဆေးပြာ လိမ်းပေးလို့ ရတယ်။ မိခင်နို့ကို အမြဲ သန့်နေပါစေ။ လိုအပ်ရင် Nystatin Oral Suspension 4-6 mL တနေ့ ၄ ကြိမ်တိုက်ပါ။ Fungus မှိုတမျိုးကနေ ဖြစ်တယ်။ Fungus ရောဂါတွေကို Mycosis လို့လဲ ခေါ်ပြန်တယ်။
မှို အမျိုးအစားတွေ အများကြီးဘဲ။ ခန္ဓာကိုယ်အပြင်မှာ နေရာကနေ ကိုယ်ထဲ ဝင်လာမယ်။ ပူလောင် စိုစွပ်ရာ နေရာတွေမှာ ပေါက်ပွါးတတ်တယ်။ အရေပြား အရေး-အကြောင်း ရှိရာတွေမှာ ဖြစ်တတ်တယ်။ အတွင်းခံဝတ်တဲ့ နေရာမှာ ရောဂါရရင် Diaper candidiasis ခေါ်တယ်။ လက်သည်းမှာ ဖြစ်ရင် ကြာကြာကုရတယ်။
ကင်ဆာဆေး၊ စတီရွိုက်ဆေး၊ ပဋိဇီဝဆေး ပေးနေရင်း မှိုရောဂါ ဖြစ်တတ်တယ်။ ဘက်တီးရီးယားပိုး ဝင်နေတဲ့ အခါမျိုးမှာ စတီရွိုက်ပါတဲ့ မျက်စဉ်း ခတ်မိရင် မှိုရောဂါ နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်၊ သွေးဆုံး၊ ဆီးချိုနဲ့လဲ တွဲတတ်တယ်။ ဆီးပိုက် စတာမျိုး တပ်ထားရသူတွေမှာ မှိုရောဂါဝင်လာတတ်တယ်။ Fluconazole 100 mg/d ဒါမှမဟုတ် Itraconazole 200 mg/d ဆေး ၁ဝ-၁၄ ရက် ပေးတယ်။ AIDS နဲ့ လူကီးမီးယားနဲ့လဲ တွဲဖြစ်တတ်တယ်။ အစာမြိုပြွန်မှာ လာဖြစ်မယ်။ အစာမြိုရင်-ရေမြိုရင် နာမယ်။ အောက် ဆက်ဆင်းရင် ပျို့-အန်ဖြစ်မယ်။ ရေ-ဆား ခမ်းခြောက်တာ ဖြစ်လာမယ်။ ရင်ညွန့်ရိုး အောက်က နာမယ်။
မှိုက သွေးထဲ ရောက်ရာကနေ အထဲအင်္ဂါတွေမှာ ရောဂါရစေနိုင်တယ်။ မျက်နှာ၊ နား-နှာခေါင်း-လည်ချောင်း၊ ဦးနှောက်၊ နှလုံးသား၊ ဆိုးဝါးတဲ့ မှိုရောဂါကို ဆေးအပြင်းတွေပေး၊ ဆေးရုံတက် ကုရတာမို့ ဆေးနည်းတွေ မရေးတော့ပါ။ (၄၅%) အသက် အန္ကရာယ် ထိခိုက်နိုင်တယ်။
အသက်က ၂၆ နှစ်ရှိပါပြီ။့့ မှာ အလုပ်လာလုပ်တာ ၃ လ လောက်ပဲရှိပါသေးတယ်။ အလုပ်ကစိတ်ဖိစီးမှု နည်းနည်းရှိပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာနေတုန်းက ကားမူးပြီးအန်ချင်တာလောက်ပဲရှိတာပါ။ ဆေးခန်းပြတာလဲ စကားပြော အဆင်မပြေတာကြောင့်ပါ။
ခရီးသွားစဉ် မူးဝေ အော့အန်ခြင်းဖြစ်ရသည်မှာ မျက်စိကမြင်သိ၍ ဦးနှောက်ဆီပို့လွှတ်သည့် အာရုံကြောစနစ်၏ ပေးပို့ချက်နှင့် ကိုယ်ခန္ဓာ အတတ်-အဆင်း၊ ဘယ်ကွေ့-ညာကွေ့ ဖြစ်သည်အား နားအတွင်းထဲရှိ အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းက ပို့လွှတ်သည့် ပေးပို့ချက်တို့ သဟဇတမဖြစ်ခြင်းကြောင့် မူးဝေ အော့အန်ဖြစ်စေခြင်းဖြစ်သည်။ Hyoscine, Cyclizine, Cinnarizine, Promethazine တို့ကိုပေးနိုင်သည်။ နားအတွင်းက လာမည့် ပေးပို့ချက်အား ဦးနှောက်၏ အန်ခြင်းကို ဖြစ်စေသည်နေရာသို့ မရောက်စေရန် တားဆီးမည့်ဆေးကို ပေးရခြင်း ဖြစ်သည်။
ခရီးသွားစဉ် မူးဝေ အော့အန်ခြင်းအတွက် ခရီးမထွက်မီ နာရီဝက်၊ ၁ နာရီကြိုတင်သောက်ရမည်။ အချို့ဆေးက ၄ နာရီ ခံပြီး အချို့က ၂၄ နာရီခံသည်။ ဆေးကို ရေတဖန်ခွက်အပြည့်ဖြင့်သောက်ပါ။ နားကြောင့်ဖြစ်ရသည့် ခေါင်းမူးရောဂါ အတွက် ဆေးကို တနေ့လျှင် ၄-၆ ကြိမ်သောက်ရသည်။ အိပ်ချင်မည်။ အိပ်ပျော်နေမည်။
Viral Load မရှိတော့တဲ့လူတွေဆီမှသွေးနဲ့ထိရင် ကူးနိုင်ပါသလား။
Hepatitis C viral load ကို ဒီအတွက်သုံးပါတယ်။
1. Diagnose hepatitis C စီပိုးရှိနေတာသေချာအောင်၊
2. Predict the chances ofasuccessful hepatitis C treatment စီပိုးဆေးပေးရင် ရနိုင်တဲ့ အောင်မြင်မှု အလားအလာ၊
3. See how well treatment for hepatitis C is working ဆေးကုသမှုရဲ့ သက်ရောက်မှု။
ဒါပေမဲ့ ကူးစက်မှု ဆိုးနေ-မနေကို မသိနိုင်ပါ။ ရောဂါ ဆိုး-မဆိုး မသိနိုင်ပါ။
Hepatitis C viral load number ဂဏန်းတွေကို တိတိကျကျသိရတာထက် များလာတယ်၊ နည်းလာတယ်ဆိုတဲ့ နှိုင်းယှဉ်ချက်ကသာ အရေးပါတယ်။
Hepatitis C viral load is approximately 1 million IU/mL (2 million RNA copies/mL) အမှတ်နဲ့ ပြောနိုင်တယ်။
Chronic hepatitis C စီပိုးကြောင့် နာတာရှည် အသဲရောင်နေသူတွေမှာ အများအားဖြင့် 100,000 နဲ့ 10,000,000 RNA copies/mL ကြားမှာရှိနေမယ်။ တနည်းအားဖြင့် 50,000 to5million IU/mL ဖြစ်တယ်။
Constipation (2) ဝမ်းချုပ်ခြင်း (၂)
အကောင်းဆုံးနည်းကတော့ ဖိုက်ဘာ ပါတဲ့အစားအစာ များများစားပေးဘို့ပါ။ Fiber ဖိုက်ဘာ ဆိုတာ ဟင်းသီး ဟင်းရွက်တွေထဲမှာပါတယ်။ စားလိုက်ရင် အစာလမ်းကနေ စုပ်ယူမသွားဘဲ ကျန်နေတာမျိုးဖြစ်တယ်။ ဝမ်းထုထည် များစေမယ်။ ဝမ်းပျော့စေမယ်။ သစ်သီးတွေထဲမှာများတယ်။ တမျိုးနဲ့တမျိုးတော့ မတူကြပါ။ လေထတာတော့ ရှိနိုင်တယ်။ ကိုယ်နဲ့သင့်တာကို မှတ်သားထားပြီးစားပါ။ အူထဲနေတဲ့ ဗက်တီးရီးယားတွေကနေဖြစ်စေလို့ပါ။ ရေလဲ များများ သောက်ဘို့ လိုပါတယ်။ Lubricant laxatives ချောဆီသဘော ဝမ်းနုတ်ဆေး
Mineral oil ဆီတွေသုံးတယ်။ ရေနဲ့ရောထားတဲ့ Emulsion လဲသုံးတယ်။ ဆီကနေ ဆီထဲပျော်ဝင်တဲ့ ဗီတာမင်တွေကို စုပ်ယူသွားနိုင်တာသတိထားရမယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ မသင့်ပါ။ Warfarin (Coumadin) ဆေးနဲ့ oral contraceptives ကိုယ်ဝန်တားဆေးတွေကို သက်ရောက်စေနိုင်တယ်။ အစွမ်းနည်းစေမယ်။ Emollient laxatives ဝမ်းပျော့်ဆေး
Docusate လိုဟာပါတယ်။ ဥပမာ Colace လို။ ဝမ်းကိုရေများစေတယ်။ ဆီစုပ်ယူတာကို ပိုစေနိုင်တယ်။ အသဲနဲ့ တက်စိတွေမှာ လာစုနေမယ်။ Hyperosmolar laxatives ဟိုက်ပါအော့စမိုလာ ဝမ်းနုပ်ဆေး
ဝမ်းကိုပျော့စေမယ်။ Lactulose (Kristalose) လက်ကျုလို့စ်၊ Sorbitol ဆော်ဘီတော နဲ့ Polyethylene glycol (MiraLax) ပေါ်လီအက်သလင်း ဂလိုင်ကောလ် တွေဖြစ်တယ်။ တာရှည်သုံးနိုင်တယ်။ ဗက်တီးရီားးတွေကြောင့် လေပွနိုင်တယ်။ Saline laxatives ဆာရည်ဝမ်းနုပ်ဆေး
Magnesium hydroxide, Sulfate, Sodium phosphate နဲ့ citrate တွေပါမယ်။ ဝမ်းပျော့စေမယ်။ ကျောက်ကပ် မကောင်းသူတွေအတွက် မသင့်ဘူး။ သက်ရောက်မှု မြန်တယ်။ ခဏခဏမသုံးသင့်ဘူး။ ဝမ်းသြးတာ များစေနိုင်တယ်။ ဓါတ်ဆားရည်သောက်ဘို့အထိ လိုချင်လိုမယ်။ အပျော့စားဖြစ်တဲ့ Milk (Cream) of magnesia ကိုအများဆုံးသုံးတယ် Epsom Salt (Magnesium sulfate) ဆားခါးက ပိုပြင်းတယ်။ Stimulant laxatives စတီမျူလင့် ဝမ်းနုပ်ဆေး
အးကကြွက်သားတွေကို ပျော့ပေးတယ်။ ဝမ်းထဲ ရေများစေမယ်။ Cascara (castor oil) ဝကက်ဆးတီ၊ Senna ပွေးကိုင်း၊ Aloe တွေသုံးတယ်။ ပြင်းလို့ ဝမ်းသွားတာများမယ်။ ပိုတက်ဆီယမ် နည်းမှာသတိထားရမယ်။ ရေရှည်မသုံးသင့်ဘူး။ Bisacodyl (Dulcolax, Correctol) ဆေးဖြစ်တယ်။
Phosphate enemas (Fleet phosphosoda) ဖေါ့စ်ဖတ်၊ Mineral oil enemas ဆီ နဲ့ Emollient enemas (Colace Microenema) အီမိုးလီယင့်တွေဖြစ်တယ်။ ဝမ်းကမာနေပြီးဆို့နေတာမျိုးသုံးသင့်တယ်။ ခဏခဏမသုံးသင့်ပါ။ Suppositories ဝမ်းခြူတောင့်
Bisacodyl (Dulcolax) နဲ့ Glycerin suppositories တွေသုံးတယ်။ Combination products တွဲဖက်ဆေး
ပွေးကိုင်းနဲ့ရောထားတဲ့ senna and psyllium (Perdiem)၊ senna and docusate (Senokot-S) နဲ့ senna and glycerin (Fletcher's Castoria) တွေဖြစ်တယ်။ Casanthranol, Docusate, and glycerin (Sof-lax Overnight) က ၃ မျိုးရောထားတာဖြစ်တယ်။ ရေရှည်မသုံးသင့်ဘူး။ ဆေးလက်မှတ်နဲ့သာဝယ်ရတာတွေ
• Tegaserod (Zelnorm)
• Lubiprostone (Amitiza)
• Linaclotide (Linzess)
Miscellaneous drugs တခြားဝမ်းနုပ်ဆေးတွေ
• Misoprostol (Cytotec)
• Folic acid (ဖေါလစ်-အက်စစ်) ဆိုတာဗီတာမင် ဘီအုပ်စုဝင်ဆေး ဖြစ်တယ်။ Vitamin B9, Vitamin Bc, Folacinနဲ့ Folate လို့လဲခေါ်တယ်။
• (ဖေါလစ်-အက်စစ်) နည်းတဲ့ သွေးအားနည်းတာနဲ့ သံဓါတ်နည်း-သွေးအားနည်းရောဂါတွေ ဖြစ်နေသူဟာ မောပန်းနေမယ်။ အားယုတ်နေမယ်။ အစာခြေတာ မကောင်းလို့ ဝမ်းပျက်တတ်တယ်။ စားချင်စိတ် နည်းနေမယ်။ ကိုယ်အလေးချိန် ကျမယ်။ လျှာနာမယ်။ ခေါင်းကိုက်မယ်။ ရင်တုန်မယ်။ သတိမေ့တတ်ပြီး အမူအယာပါ ပြောင်းလာတတ်တယ်။ • Allergic diseases (အလာဂျီ) အတွက်လဲ သုံးတယ်။ • Depression စိတ်ကျနေသူတွေကိုလဲပေးနိုင်တယ်။ Schizophrenia စိတ်ရောဂါရှိသူ၊ Memory and mental agility သတိမေ့တတ်သူတွေကိုလဲပေးတယ်။
• Fertility ကလေးမရနိုင်တဲ့အတွဲတွေ ယောက်ျားရော မိန်းမကိုပါ ပေးမယ်။ • Folate-deficiency anaemia (ဖေါလစ်-အက်စစ်) နည်းတဲ့ သွေးအားနည်းတာနဲ့ Iron-deficiency anemia သံဓါတ်နည်း သွေးအားနည်းရောဂါတွေ ဖြစ်နေသူဟာမောပန်းနေမယ်။ အားယုတ်နေမယ်။ အစာခြေတာမကောင်းလို့ ဝမ်းပျက်တတ်တယ်။ စားချင်စိတ် နည်းနေမယ်။ ကိုယ်အလေးချိန် ကျမယ်။ လှာနာမယ်။ ခေါင်းကိုက်မယ်။ ရင်တုန်မယ်။ သတိမေ့တတ်ပြီး အမူအယာပါ ပြောင်းလာတတ်တယ်။
• မွေးရာပါ အင်္ဂါချို့ယွင်းခြင်းကိုလည်းနည်းစေသည်။
• အဝလွန်သူတွေ အဆီချဘို့အတွက်လည်းသုံးတယ်။ Type2Diabetes ဆီးချိုကိုလဲ ပေးတယ်။ • Menopause သွေးဆုံးချိန်မှာလဲ အသုံးကျတယ်။ • Renal disease ကျောက်ကပ်ရောဂါ၊ Bone health အရိုးရောဂါ၊ Rheumatoid arthritis လေးဘက်နာသူတွေကိုလဲ ပေးတယ်။ • လူတွေမှာသွေးနီဥနဲ့ DNA ခေါ်တဲ့ မျိုးဗီဇတည်ဆာက်ဘို့ (ဖေါလစ်-အက်စစ်) လိုတယ်။ ဦးနှောက်-အာရုံကြောတွေ အတွက်လဲအသုံးဝင်တယ်။
• ယေဘုယျဆိုရင် တနေ့မှာ 0.5-1.0 mg/daily စားဆေး-ထိုးဆေးအဖြစ်ပေးတယ်။ • သွေးနီဥ နဲ့ DNA ခေါ်တဲ့ မျိုးဗီဇ တည်ဆာက်ဘို့ (ဖေါလစ်-အက်စစ်) လိုတယ်။ ဦးနှောက်-အာရုံကြောတွေ အတွက်လဲ အသုံးဝင်တယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ နည်းနေရင် အထဲကကလေး ဦးနှောက်ဖြစ်ပေါ်တာကို အားနည်းစေမယ်။ Spina bifida ခေါ်တဲ့ ခါးရိုးဆစ်ကနေ မွေးကတည်းက အနာလိုဖြစ်နေတာမျိုးကို တားဆီးနိုင်တယ်။ ကိုယ်ဝန် ပဌမ ၃ လ အတွင်း Folic acid 400 (mcg) လိုအပ်တယ်။ ကလေးပျက်ကျမှာကိုလည်း တာဆီးပေးမယ်။ မွေးပြီး ကလေး နို့တိုက်ချိန် ဆိုပါစို့ ၆ လအထိ သောက်သင့်တယ်။ အထဲကကလေးမှာ NTD ဆိုတာရှိေ